Intsingiselo yephupha-Ukutolikwa kunye nesichazi-magama esisemthethweni
Kuthetha ntoni ukuphupha iinyoka?
Kuthetha ukuthini ukuphupha usana?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ilindle okanye indle?
Kuthetha ukuthini ukuphupha umtyholi okanye iidemon?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amagqwirha nobugqwirha?
Kuthetha ukuthini ukuphupha uhlatyiwe okanye uhlatyiwe?
Intsingiselo yokuphupha uchama
Intsingiselo yokuphupha amazinyo okanye ukuba amazinyo akho awe
Kuthetha ukuthini ukuphupha udutyulwa okanye udutyulwa?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubuyile kwi ex yakho?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amanzi?
Kuthetha ntoni ukuphupha amanzi acwebezelayo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amanzi amdaka?
Intsingiselo yokuphupha ngamanzi acocekileyo
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngezigcawu?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngoonomeva?
Kuthetha ukuthini ukuphupha oonomadudwane okanye oonomadudwane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iminenga?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ibhayisekile?
Kuthetha ukuthini ukuphupha inkunkuma?
Kuthetha ukuthini ukuphupha uhlamba?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amaphela?
Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga ne-coronavirus?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iingwenya?
lithetha ntoni iphupha elinamazinyo?
Kuthetha ntoni ukuphupha uphuma amazinyo?
Kuthetha ntoni ukuphupha ihlengethwa?
Kuthetha ukuthini ukuphupha uhamba ze?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngemali?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izinyuko?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ipati?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iziporho?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izigebenga?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iikati?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amakhalane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkukhu?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iintshulube?
Kuthetha ukuthini ukuphupha esibhedlele?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iimbovane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha uzenza isidenge?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amaqanda?
Usapho kunye nabahlobo
Ngaba unomdla wokwazi i- ukutolika kunye intsingiselo yamaphupha akho? Ngaba ukhe wema wacinga ngephupha elibi eliziphindayo kwaye elingakuvumeli ukuba uphumle? Yintoni le i-subconscious izama ukukuhambisa xa ulele kwaye singazenza njani ukuba zichaze ngokuchanekileyo iingcinga zethu zobusuku?
Usenokungayazi, kodwa ebusuku ingqondo yethu isasebenza kwaye iyakwazi ukuphupha nokuba usuku beludinisa kangakanani. Ingakumbi, iphupha ngalinye esinalo lahluke ngokupheleleyo, jonga i- intsingiselo yamaphupha kunye nokufunda ukutolika izicwangciso zayo ezintsonkothileyo kuya kukunceda ukuba uzazi ngcono.
Ukufundwa kwentsingiselo kunye ukutolika iphupha yinto esele ixakekile kwaye yabangela umdla ebantwini ukusukela ekuqaleni kwexesha. Ngelixa lakumaxesha amandulo ukucazululwa kwemiqondiso yamaphupha kwakufuna ukufumana umyalezo ovela kuThixo, ukusukela kwinkulungwane yama-XNUMX kunye nokuphuhliswa kwe-psychoanalysis, ukutolikwa kwamaphupha kusetyenziselwa ukuveza imixholo egcinwe ngokungazi engqondweni yomntu okanye inkxalabo yosuku. sikhathazeke phakathi kwabanye.
Okwangoku enkosi Iingcali zengqondo ezaziwayo njengabadumileyo Sigmund Freud, umFrentshi uJean Laplanche noJean-Bertrand Pontalis okanye iSwitzerland UCarl Gustav Jung ukutolikwa kwephupha kuyekile ukubonwa njengento engekho nzulu kwaye sele iyindlela yezonyango. Ukuba unomdla kwisihloko, Nantsi ikhonkco kwincwadi yam yokubhala kunye nababhali endibathandayo.
1 Fumanisa intsingiselo yamaphupha simahla kwisichazi-magama sethu esikhethekileyo
2 Isichazi magama esisemthethweni: ukutolikwa akusayi kuba yimfihlakalo kuwe
3 Yenza iphupha utolike kwaye ufumanise ukuba lithetha ntoni
4 Ukutolikwa nentsingiselo yamaphupha
5 Ukutolikwa kwamaphupha kudala
6 Uphupha ntoni?
7 Ukuhlaziywa kwengqondo kunye nokutolika kukaFreud
8 Isayikholojisti yohlalutyo kaCarl Jung
9 Isichazi-magama ukutolika intsingiselo yamaphupha
11 Athini amanqanaba okulala
11.1 Isigaba I: Inqanaba lokubhabha
11.2 Isigaba II: isigaba sokulala esilula
11.3 Isigaba III: inqanaba lotshintsho
11.4 Isigaba IV: Inqanaba lokulala ngokunzulu
11.5 Inqanaba lokulala le-REM
12 Uninzi amaphupha aqhelekileyo
13 Iingcebiso zokukhumbula kakuhle iphupha
14 Intsingiselo yamaphupha
Fumanisa intsingiselo yamaphupha simahla kwisichazi-magama sethu esikhethekileyo
Kule migca ilandelayo unokufumana uluhlu lwee Iintsingiselo zephupha ezivela kwi-AZ, ukwenza kube lula kuwe ukuba usebenzise iwebhu. Onke la maphupha ayindibaniselwano yamaphupha abaluleke kakhulu aphathwe ngababhali abadumileyo kwaye amanye amagalelo am asekwe kumava am ngamaphupha endiye ndasokola kuwo kwaye ndiwahlalutye ndawufundisisa ngokweenkcukacha iminyaka.
Uluhlu olugqibeleleyo kodwa luyaqhubeka kwindaleko eqhubekayo, Ukuba unephupha elikukhathazayo kwaye eliziphindayo Kwaye akubonakali kuluhlu endikucelayo ndibhalele umyalezo ngecandelo lewebhu kwaye ndiza kuliphanda ityala lakho kwaye ndongeze elo phupha kuluhlu ukuze abanye abasebenzisi bazi ngalo.
Lifikile ixesha lokuba ufumane iphupha elikukhathazayo. Nalu uluhlu olulungelelaniswe ngokwe-alfabhethi.
Amaphupha aqala ngo-A
Kuthetha ukuthini ukuphupha imoto, imoto okanye imoto?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ukubulala okanye ukubulala?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngabahlobo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iingelosi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinaliti?
Kuthetha ukuthini ukuphupha inqwelo-moya?
Intsingiselo yokuphupha ukuba isigcawu sikuluma
Amaphupha aqala ngo-B
Kuthetha ukuthini ukuphupha ii-slugs?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izikhova kunye nezikhova?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izithonga zemipu?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izinambuzane kunye neebugs?
Kuthetha ukuthini ukuphupha udanisa?
Amaphupha aqala ngo-C
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinyoka?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngemela?
Kuthetha ukuthini ukuphupha uwela kwindawo engenamsebenzi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha oononkala?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amagwababa?
Iphupha malunga neenwele
Amaphupha aqala ngo-D
Kuthetha ukuthini ukuphupha usilwa okanye uxabana?
Amaphupha aqala ngo-E
Kuthetha ukuthini ukuphupha isoka lakho langaphambili okanye intombi yakho yangaphambili?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iindlovu?
Amaphupha aqala ngo-F
Kuthetha ntoni ukuphupha u-Facebook?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngomlilo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iintyatyambo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iziqhamo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izalamane ezifileyo
Amaphupha aqala ngo-G
Amaphupha aqala ngo-H
Amaphupha aqala ngam
Kuthetha ntoni ukuphupha unogumbe?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngecawa?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngokungathembeki okanye ukuqhathwa?
Amaphupha aqala ngo-L
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngeentshulube?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iingonyama?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iingcuka?
Kuthetha ukuthini ukuphupha amacikilishe?
Kuthetha ukuthini ukuphupha i-labyrinth?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izitshixo?
Amaphupha aqala ngo-M
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubulawa?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubulala?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkawu?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iityesi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iimpukane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ukufa?
Kuthetha ukuthini ukuphupha umntu eswelekile?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iingqekembe kunye namatyala?
Amaphupha aqala ngo-N
Kuthetha ukuthini ukuphupha uqubha?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngekhephu?
Amaphupha aqala ngo-O
Kuthetha ukuthini ukuphupha igolide?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngamaza amakhulu?
Kuthetha ukuthini ukuphupha u-ouija?
Amaphupha aqala ngo-P
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubhubhane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngeentwala?
Kuthetha ntoni ukuphupha ipuli yokudada?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izinja?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iintlanzi okanye iintlanzi?
Ukuphupha uleqwa okanye uleqwa
Kuthetha ukuthini ukuphupha amahobe?
Kuthetha ukuthini ukuphupha isonka?
Kuthetha ukuthini ukuphupha inja ikuluma?
Amaphupha aqala ngo-R
Kuthetha ukuthini ukuphupha iimpuku?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngempahla?
Ithetha ukuthini iphupha lamasele namasele?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iwotshi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iigundane?
Kuthetha ukuthini ukuphupha umlambo?
Amaphupha aqala ngo-S
Kuthetha ukuthini ukuphupha iZombies?
Amaphupha aqala ngo-T
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkunzi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha itsunami?
Kuthetha ukuthini ukuphupha inyikima okanye inyikima?
Kuthetha ukuthini ukuphupha izingwe?
Kuthetha ukuthini ukuphupha i-tarantulas?
Kuthetha ukuthini ukuphupha iinkanyamba neenkanyamba?
Amaphupha aqala ngo-V
Kuthetha ukuthini ukuphupha uhamba okanye uhamba?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngentaba-mlilo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ukubhabha okanye ukubhabha?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ilokhwe yomtshato?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ukugabha?
Kuthetha ukuthini ukuphupha nge-vampires?
Xa sele silele, sihamba uhambo olumnandi olubonisa iminqweno yethu kunye noloyiko. Iiyure zokuphumla ziba ngumkhangeli kwiingxaki zemihla ngemihla, kwezo zinto zixhalabisayo ezihlasela iingqondo zethu, ke ngoko kubalulekile ukuqonda ukutolika iphupha ukucacisa intsingiselo yayo.
Isichazi magama esisemthethweni: ukutolikwa akusayi kuba yimfihlakalo kuwe
Kumaxesha amandulo, iinkcubeko zazizama ukufumana indlela yokutolika iphupha ngalinye, ezinye zivela kwindlela eyimfihlakalo kunye neesoteric, kodwa abanye balandela indlela yesayensi. Oko kukuthi, njengakuyo nayiphi na enye impucuko, bekukho abantu abakhohlisayo nabaziwayo kwezengqondo.
Yonke into eyenzekayo kwi-subconscious yethu xa siphupha inokunceda ukusombulula amathandabuzo amaninzi esingakwaziyo ukuwaqonda ngexesha lokuvuka. Mhlawumbi esi sesona sizathu sokuba abantu bachithe iinkulungwane belandela iintsingiselo zabo yazi yonke into malunga nengqondo kunye nobuntu bakho.
Yenza iphupha utolike kwaye ufumanise ukuba lithetha ntoni
Ngaba ngokwenene sinamaphupha okuqala? Kutheni bemele amabhongo noloyiko lwethu? Kutheni le nto i-subconscious idala iingcinga ezingafikelelekiyo? Ngamanye amaxesha sinokumangaliswa kukuntsokotha kwephupha. Siphupha ukuba siphulukana nomsebenzi, ukuba ilungu losapho liyasweleka okanye siza kohlukana neqabane lethu. Oko kukuthi, kunjalo amaphupha ahambelana nokusingqongileyo, kwaye ngamanye amaxesha zibonakala ziyinyani kangangokuba sijonga intsingiselo kumyalezo wephupha osithumelela i-subconscious. Ukuba ufuna ukufumanisa indlela yokwenza utoliko oluchanekileyo lwamaphupha akho cofa apha.
Ukutolikwa nentsingiselo yamaphupha
Ukwazi intsingiselo yephupha akufani nokutolika. Ukwazi ukutolika ngokuchanekileyo akukho phupha, akufuneki ukuba uyazi intsingiselo yalo kakuhle, kodwa kufuneka wazi ezinye iinkcukacha ezibalulekileyo kwaye Umxholo apho zenzeka khona, kuba intsingiselo efanayo yephupha inokuba nokutolikwa okuninzi okwahlukileyo kubantu abohlukeneyo kuba iya kuba nefuthe kwinto ethethwa yile ntsingiselo ngokwendlela yakho, usapho lwakho, indawo okuyo, imeko yakho yothando, impilo yakho nokuba imeko yakho yezemali. Umzekelo, ayifani phupha ngegolide ukuba usisityebi kunokuba ulihlwempu. Ekugqibeleni iphupha liyafana, kodwa ukutolika kwahluke kakhulu.
Ukutolikwa kwamaphupha kudala
AmaGrike ayesele enomdla kwesi sihloko. Kodwa emva phayaa, inkqubo yakhe yokuzama ukutolika amaphupha yayilawulwa ngokwesiko lomlomo. Oko kukuthi, zonke ezo ngcamango zazigqithiselwa kwizizukulwana ngezizukulwana kwaye ubukhulu becala, yayiyi ukuthanda koothixo oko kwabonwa kula maphupha.
Kodwa kwelinye icala lale nkolelo, ababhali bathanda Isithandi sobulumko uPlato okanye uAristotle Baye babhala izimvo zabo ngalo mbandela kwiincwadi ezinje ngeRiphabhlikhi yeyokuqala kunye neephupha malunga nesibini. Ngaphandle kokulibala ukuba, emva kwexesha elithile, uPythagoras naye wathetha ngalo mbandela njengendlela yokunxibelelana nezinto ezinamandla angaphezu kwendalo. Ngelixa amaStoiki ebheja kulungiselelo. Emva kwexesha kwakuza izimvo ezintsha zikaCicero okanye uArtemidoro.
Ukuzama ukuthelekelela okwenzekayo okusingqongileyo, nangamaphupha, kuthiwa kuphupha. Kodwa ngamaphupha kuphela, kuba xa bekukho amaphupha amabi ayabandakanyeka, kwathiwa usathana wawaqalisa kwaye ayengakulungelanga ukuhlalutywa. Kuyinyani ukuba ngaphandle kwazo zonke iingcamango ezikhoyo, oku ubuchule bokuvumisa, isekwe kwizifundo zikaSigmund Freud.
Ukuhlaziywa kwengqondo kunye nokutolika kukaFreud
Ezinye zeengcamango okanye izifundo eziza kuza noFreud sele zineziseko zazo kwinto esichazileyo. Oko kukuthi, ngekhe babenoveli, kuba isiko lalikhona kubo. Kodwa, nangona ilixesha elinzima ukuhlalutya, kufuneka kuthiwe uFreud uze kubeka inqaku kwaye walandela. Ndifuna ukubonisa ukuba iisimboli ezibonakaliswe ephupheniBabenxulumene nengqondo yethu kunye nokungazi.
Ngesi sizathu, xa sihlalutya iphupha, kufuneka sithathe zonke iikhonsepthi kunye nemibono esiyibonayo kuyo kwaye singahlali nenye. Kananjalo akunakwenziwa nobuchule beenkolelo okanye ukutolikwa kohlobo oluthile. Amakhonkco kunye nobudlelwane kunye nobomi bethu bemihla ngemihla ziya kuba zezifanelekileyo kakhulu. Kuwo onke amaphupha, uFreud wanika igama elithi 'amaphupha aqhelekileyo' kwabo baphindaphindeka kuthi. Umzekelo abo banxulumene nokufa okanye ukuwa. Ukusukela xa bebonke inokuzisa ungquzulwano lwangaphakathi. Ngamafutshane, wathi amaphupha ayindlela eya ngaphakathi nakwiminqweno yethu efihliweyo.
Isayikholojisti yohlalutyo kaCarl Jung
Ukuba sifunde uFreud, kuyinyani ukuba asizokulibala ngoJung. Wayekhe waxakaniseka nazizimvo zokuqala, kodwa ugqirha wengqondo waseSwitzerland waya kwelinye inyathelo. Ngokubanzi, amaphupha kuye ayimveliso yendalo. Yonke imihla wayebona kwizigulana zakhe iingxaki zokukhohlisa kunye nemibono kwaye la maphupha kunye namanye amaphupha ayeneebhulashi eziqhelekileyo kwabanye iintsomi.
Ke apho waqonda ukuba akusoloko kunxibelelene ngqo nento ayiphilayo okanye umntu aziva ngayo. Kungenxa yoko le nto wayibiza ngokungazi nto ngokudibeneyo. Konke oku kuya kuba luhlobo lweesimboli zokuziphatha abantu abazizuz 'ilifa kwaye ezinokuchazwa njengee-archetypes okanye izinto ezithile eziphilayo. Ngamafutshane, into ebefuna ukuyidlulisa uJung yile amaphupha anentsingiselo kumava ethu kwaye baya kuba yibhulorho kwiimfuno zomphefumlo.
Isichazi-magama ukutolika intsingiselo yamaphupha
Nangona indawo elungileyo yamaphupha ilawulwa kukuthobela, zininzi izinto ezinentsingiselo echazwe kakuhle. Uphando olucokisekileyo lwezi zinto luye lwasebenza ukuqokelela yonke idatha kwifayile ye- Isichazi magama amaphupha, incwadi apho umntu anokuthi atolike eyakhe.
Ukuba unomdla kwi fumana ukuba athetha ntoni amaphupha, baqonde oko bamele kunye neesimboli zabo, kunye nesichazi-magama samaphupha ungaluthambisa lonke ulwazi simahla. Uyakuzazi ngcono ngemiyalezo ye-subconscious yakho kwaye uya kuyazi indlela yokutolika iinkxalabo zakho eziyinyani. Vula intsingiselo-suenos.com Uyakwazi ukufikelela kumanqanaba anzulu okuzazisa kunye nokuphucuka ngokomoya ngokukhangela intsingiselo yalo.
Igama lam ndinguNacho Zarzosa kwaye ndim umntu osemva kwale webhusayithi. Ndineganga kwisayikholoji I-Faculty of Psychology yeYunivesithi yaseOviedo kwaye unomdla omkhulu ngentsingiselo yamaphupha kunye novavanyo lwengqondo. Ungalubona lonke ulwazi malunga nam ucofa apha.
Athini amanqanaba okulala
Ukwazi isigaba ngasinye sokulala kungasinceda kakhulu ukuba silale kamnandi ngakumbi kwaye siphumle ngcono. Le yinto nefuthe kakhulu kwinto esiyiphuphayo, ke ngoko ukuzazi izigaba kakuhle kubalulekile.
Isigaba I: Inqanaba lokubhabha
Inqanaba lokuqala kwaye libandakanya Imizuzu eli-10 yokuqala yokulala, ukusukela xa sikwixesha lokuvuka de sozele noko.
Isigaba II: isigaba sokulala esilula
Isigaba sesibini sokulala sine ixesha elimalunga nesiqingatha sexesha lilonke lokulala kwaye linqanaba apho umzimba wakho ukhulula ngokuthe ngcembe kokusingqongileyo ngaxeshanye ukubetha kwentliziyo nokuphefumla kancinci iba nokuzola ngakumbi nangakumbi. Kweli nqanaba kunzima kakhulu kuthi ukuba sivuke, kodwa nangona kunjalo kwizigaba zethu zobuchwephesha bezinto ezinkulu zengqondo ezitshintshanayo nezinye ezincinci. Ngokwesiqhelo xa sivuka kwesi sigaba sihlala sisenza ngendlela ekhwankqisayo, umzekelo xa siphupha sikhubeka okanye siwa eweni.
Isigaba III: inqanaba lotshintsho
Inqanaba lesithathu lelona lifutshane kuzo zonke, lihlala malunga nemizuzu emi-2 okanye emi-3 iyonke kwaye ngu-a Utshintsho phakathi kokulala ukukhanya kunye nenqanaba lokulala ngokunzulu.
Isigaba IV: Inqanaba lokulala ngokunzulu
Isigaba sokulala esinzulu sihlala kwi-20% yobuthongo obupheleleyo kwaye yeyona nto ibaluleke kunayo yonke kuba imisela umgangatho wokuphumla kunye nokukwazi komzimba ukuphinda udinwe ngumhla. Inqanaba lokuphefumla liphantsi kakhulu kwaye uxinzelelo lwentliziyo luyehla kakhulu, kungoko kunzima kakhulu kuthi ukuba sivuke ngokwesiqhelo kwesi sigaba.
Inqanaba lokulala le-REM
Isigaba sokulala se-REM sithatha iipesenti ezingama-25 zokulala kwethu. Igama elithi REM livela kuRapid Eye Movement ngesiNgesi kwaye oko kuthetha ukuba amehlo ahlala ehamba phantsi kweenkophe. Umsebenzi wobuchopho ngeli nqanaba uphezulu kakhulu, phantse ukwinqanaba elifanayo naxa siphaphile kodwa kwangaxeshanye izihlunu zethu zivaliwe ukusithintela ekuphenduleni kulo lonke ulwazi oluqhutywa yingqondo yethu. Ngeli nqanaba ukulala kwenzeka ke lelona candelo libalulekileyo ekufuneka liqwalaselwe kule webhusayithi.
Uninzi amaphupha aqhelekileyo
Ayingawo onke amaphupha aqhelekileyo ngokulinganayo, kukho amaphupha abantu abaninzi abasokolayo, umzekelo phupha nge ex yakho okanye uphuphe ubuyele kwi ex yakho kwakhona, phupha ngamanzi, phupha ngendle, iphupha lokubhabha, phupha malunga nemipu o iphupha lokuwela kwindawo engenamsebenzi. Ngelixa ezinye zinqabile ezinje nge phupha ngamapolisa. Yiba nephupha eliqhelekileyo okanye elinzima ayinakutolikwa njengelungileyo okanye embi. Ngokufanayo, iphupha elinzima komnye umntu linokuba liqhelekile komnye. Kuyafana, umzekelo, ukuphupha ngamapolisa kuqheleke ngakumbi ukuba umsebenzi wakho unxulumene namapolisa, njengokusebenza ebhankini okanye esibhedlele.
Iingcebiso zokukhumbula kakuhle iphupha
Ngaba uyafuna ukukhumbula kakuhle zonke iinkcukacha zephupha ukuze kamva ufumane intsingiselo yalo? 'Ndikucebisa ukuba ubeke iphepha nepeni yokubhala yonke into into oyikhumbulayo ephupheni lakho nje ukuba uvuke. Khumbula ukuba naziphi na iinkcukacha zibaliwe, njengoko kunokuthetha lukhulu xa ulitolika ngokufanelekileyo. Emva kwexesha, xa ugqibile usuku lwakho, ngenisa isichazi-magama sethu kwaye ufunde iisimboli zento nganye ukuze uyiqonde ngcono.
Ngale ndlela, awuyi kufumana kuphela i amaphupha nentsingiselo yawo, kodwa ungafunda Kuthetha ukuthini ukuphupha ngeentwala okanye intsingiselo yokuphupha amaphela, Kunye ne- ukutolikwa nentsingiselo yokuphupha ngemali kwaye ufumane iimfihlo ezigcinwe kubunzulu bengqondo yakho. Ukusukela ngoku ukuya phambili, awusenaso isizathu sokuhlalutya intsingiselo yamaphupha kunye nokuzazi ngcono kancinci qho ebusuku.
Indlela yokutolika iphupha
© 2022 | intsingiselo-suenos.com: isichazi magama esisemthethweni samaphupha kunye nokutolika | NguNacho Zarzosa